सर्वेक्षण को भुक्तानी गरिन्छ? | Ebuno
सशुल्क सर्वेक्षणले कसरी काम गर्दछ?
तपाईंले यो पढ्ने सम्भवतः केहि साइटहरू हेर्नुभएको छ जसले भुक्तान सर्वेक्षण प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाईं अनलाइन गर्नुहुन्छ। तर यो कसरी काम गर्दछ? साधारण प्रश्नहरूको जवाफ दिन तपाईं कसरी भुक्तानी गर्नुहुन्छ? उत्तर वास्तवमा एकदम सरल छ।
यी कम्पनीहरू हुन् जुन उनीहरूका उत्पादनहरू, उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरू र उनीहरूले काम गर्ने उद्योगसँग सम्बन्धित रायहरूको बारेमा जानकारी चाहान्छन्। कहिलेकाँही यो पनि हुन्छ कि सर्वेक्षणले केही विज्ञापन समावेश गर्दछ। धेरै कम्पनीहरू यस जानकारीको लागि निकै राम्रो पैसा तिर्न इच्छुक छन् र एक सर्वेक्षणको उत्तरको लागि धन्यबादको रूपमा, हामी तपाईंलाई इबुनोमा इनाम दिन्छौं जुन तपाईं PayPal मा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ।
कसरी बारेमा अधिक पढ्नुहोस् सर्वेक्षण अनलाइन भुक्तान गरियो काम गर्दछ
सर्वेक्षण कसले गरिरहेको छ?
हामी आफैं सर्वेक्षणहरू सञ्चालन गरिरहेका छैनौं, तर CINT र P2 नमूना जस्ता कम्पनीहरूले यो गर्छन्। यी कम्पनीहरूलाई "सर्वेक्षण नमूना" कम्पनीहरू भनिन्छ जुन एक सर्वेक्षण सिर्जना गर्न र उत्तरहरू प्राप्त गर्न इच्छुक कम्पनीहरूको बीचमा बिक्री प्रक्रिया ह्यान्डल गर्दछ। CINT जस्तो कम्पनीले सर्वेक्षण सिर्जना गरेपछि तिनीहरूले ती सूचनाहरू हामीलाई पठाउँछन् जसले गर्दा हामी यसलाई आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई देखाउन सक्दछौं। जब सर्वेक्षणको जवाफ दिईन्छ, CINT ले हामीलाई थोरै रकम तिर्दछ र त्यो रकमको केही अंश हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई दिइन्छ। हामी कुन कम्पनीले सर्वेक्षण गरिरहेको छ र यसमा के प्रश्नहरू छन् भनेर जिम्मेवार छैनौं, तर हामी केवल उत्तरहरू प्रदान गर्दछौं।
भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणहरू मात्र काम गर्न सिफारिस गर्दैनन् किनकि तपाईं यसबाट धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्न। तर खाजा / कफीको लागि उदाहरणको लागि र विद्यार्थीहरूको बीचमा जेबमा थप पैसा कमाउनको लागि धेरै पैसा कमाउने यो उत्तम तरिका हो।
CINT को बारे मा एक सानो
CINT स्वीडेनमा शुरू भएको कम्पनी हो र एब्नोमा यहाँ सर्वेक्षणको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो। CINT का सर्वेक्षणहरू सजिलो र छिटो र गर्न सजिलो हुन्छन्। हाम्रो र CINT का प्रणालीहरू सँगै मिलेर सर्वेक्षणहरू भेट्टाउछन् जुन तपाईंको प्रोफाइलसँग मेल खान्छ, जुन केहि सर्वेक्षणहरू द्वारा आवश्यक हुन्छ।
भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणहरू कसरी सुरू गर्ने?
तपाईलाई सुरू गर्नु पर्ने सबै कुरा भनेको साइटमा दर्ता गर्नु हो जुन तपाईंलाई एबुनोमा सर्वेक्षणको लागि पैसा प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं "खोजी गर्नुभयो भने तपाईले हामी जस्तो पाना पनि पाउन सक्नुहुन्छ" सशुल्क सर्वेक्षण "अधिकांश साइटसँग दर्ता गर्न सहज र सजिलो प्रक्रिया हुन्छ र सुरू गर्न सकिन्छ त्यसैले तपाईं केही मिनेटमा पहिलो सर्वेक्षण लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणहरू कसरी काम गर्छन् र यसको अर्थ केहि बारे थप पढ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो होमपेज यहाँ .